Video-Kenya iyo Itoobiy oo isbahaystay dejiyeyna qorshe lagu fashilinayo Farmaajo. – Puntland News
Home 2017 March 20 Somali News Video-Kenya iyo Itoobiy oo isbahaystay dejiyeyna qorshe lagu fashilinayo Farmaajo.
Video-Kenya iyo Itoobiy oo isbahaystay dejiyeyna qorshe lagu fashilinayo Farmaajo.
March 20, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 0
Xiriirka Diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeya Muqdisho iyo Adis ababa ayaa aad u xumaaday kadib natiijada doorashadii Madaxweynaha Soomaaliya iyo qaabkii Xaflada caleema saarka Madaxweyne Farmaajo loogu soo dhaweeyay Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya Hailemariam Desalegn oo si aan wanaagsanayn loola dhaqmay markii cod baahiya loogu yeeray inuu kelmado ka yiraahdo xaflada, waxaana taa bedelkeeda si wanaagsan oo aan horey loo arkin loogu sacab tumay Madaxweynaha kenya markii cod baahiyaha lagu soo dhaweynayay.
Wixii markaas ka dambeeyay Adis ababa iyo Muqdisho wax xiriir ah ma dhex marin, mana wanaagsan xiriirka ay leeyihiin Madaxweyne Farmaajo iyo Hailemariam Desalegn.
Lama garanayo sababta Hailemariam Desalegn uga caga jiidayo inuu wax wada shaqeyn ah la yeesho Farmaajo balse waxaa muuqata in Itoobiya oo kaalin weyn ku leh arrimaha Soomaaliya haatan u dhaqmayso qaabkii ay u dhaqantay markii 2000 Carte lagu doortay C/qaasim, waxayna markaas abuurtay hogaamiyaal mucaaradsan C/qaasim, iyadoo hub u qeybisay.
Marka aad eegto mad madowga diblomaasi ee Dowladda Farmaajo iyo Itoobiya durba waxaad calaamadaynaysa rajo xumo aad u weyn.
Farmaajo wuxuu iska fogeeyay siyaasiyiinta xiriirka la leh Itoobiya, Diblomaasiyiinta waxay sheegayan in Farmaajo uu raacay oo keliya dareenka dadka shacabka oo Itoobiya u arka inay caqabad ku tahay maslaxada dalkooda.
Halkii looga baahnaa inuu sameeyo dareen ka duwan midka ay aaminsan yihiin shacabka soomaaliyed, muujinaya awood diblomaasiyadeed oo cadaawad ka fog xilligan maadama soomaaliya aysan lahayn xilligan awood ay kaga hortagto Itoobiyan.
Adis ababa waxay u aragtaa is bedelka siyaasadeed ee ku dhacay soomaaliya mid iyada halis ku ah, waxay aamineed daro ka muujisay labada aqal ee Soomaaliya oo ku soo biiran dhalinyarado xamaasadaysan oo wadaniyada ka buuxda iyo halis kale oo ay is leedahay waxaa ka imaan kara Villa Soomaaliya.
Itoobiya aqoon badan uma laha Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya Xasan Kheyre waxayna eegaysa siyaasadda ku shaqeyn doono kadib marka uu soo dhiso Golihiisa Wasiirada.
Marka laga soo tago Itoobiya, Dowladda kenya waxay ixtiraam daro u muujisay Madaxweyne Farmaajo.
Madaxweynaha kenya ayaa isagoo ka war haynin Dowladad Soomaaliya waxaa uu booqday Dhoobley oo degaan soomaaliyed ah, sida sharcigu yahay waxay ahayd in booqashadiisa ku war geliyo dowladda soomaaliya ama ugu yaraan mas’uul ka tirsan dowladda la socdo socdaalkiisa.
DAAWO UHURU KENYATTA